AH: စေတနာလား အဿပြာလား
ကျွန်တော်ဆက်တွေးကြည့်မိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရော ဒီလို အဖြစ်မျိုး ရှိလား။ ကျွန်တော်တို့ ဘာများမှားလည်းပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မွေးဖွားလာတာဟာ ကျွန်တော်တို့မှားတာလား? မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာ ရိုးသားစွာ ငွေရှာနေရက်နဲ့ ငွေကြေးမပြည့်စုံတာဟာ သူ့အမှားလား? တစ်ကယ်လို့ ငွေကြေးမပြည်စုံတဲ့ လူတစ်ယောက် မကျန်းမမာ ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ သူ့အတွက် အားကိုးစရာဟာ ဘာလဲ? မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရက်နဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို လျှစ်လျူရှု့တဲ့ လုပ်ရက်ဟာ ဘယ်လောက်အထိ ရင်နာစရာကောင်းလဲ? ကိုယ့်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်မှု့မပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ရတာလောက် ရင်နာစရာ ကောင်းတာမရှိပါဘူး။ ဆိုလိုတာက နိုင်ငံသား ပြောင်းပြီး ခံယူကြမယ်ဆိုတဲ့ ပေါ်ကျော့ အတွေးအခေါ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို ပြုပြင်နိုင်တာက နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ နိုင်ငံသားတွေ သာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့နေ့တော့ နိုင်ငံသားတိုင်း ကျန်မာရေးရဲ့ အားကိုးရာဟာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဖြစ်သည် လို့ စိတ်ထဲမှာ အမှန်တကယ် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်လာမည့် နေ့ရှိလာဖို့ မျှော်လင့်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဆေးရုံသို့ ၀င်သွားသောအခါ အပေါက်စောင့်က မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာလို့ ကျွန်တော်တို့ကို နှုတ်ဆက်ပြီး နပ်စမ လေးများက ဖော်ရွေပြူငှာစွာနဲ့ နိုင်ငံသားကောင်း ပီသစွာ အလုပ်လုပ်လာမယ့် နေ့ကို မျှော်လင့်မိသည်။
Posted by AH at 8/01/2012 01:08:00 PM
မဒမ်ကိုး August 1, 2012 at 1:15 PM
အင်းးး ပြောကိုမပြောချင်တော့တာပါ ဆြာထွတ်ရယ်
စံပယ်ချို August 1, 2012 at 8:27 PM
pigpig August 1, 2012 at 8:52 PM